Code of Conduct – Community Development Association
CDA isalocal NGO and is carrying out the community development works in collaboration with UN agencies and INGOs without any discrimination against race, color, sex and beliefs. To preserve the status quo of CDA, every staff requires knowing the code of conduct and adhering to it.
CDA သည် ဒေသခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်၍ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ NGO နှင့်အတူပူးပေါင်း၍ လူမျိူး၊ အသားရောင်၊ လိင်နှင့်ယုံကြည်မှုများကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲ လူမှုတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ယင်းအဆင့်အတန်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက် CDA ဝန်ထမ်းများသည် ပြဌာန်းထားသည့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကို သိရှိလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည်။
Must undertake the task honestly at the best.
တာဝန်ဝတ္တရားများကို အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစား၍ ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာလုပ်ဆောင်ရမည်။
Should deal communities and among staff with due respect.
ဒေသခံများသော်လည်းကောင်း၊ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းကြားတွင်လည်းကောင်း ဆက်ဆံရာတွင် ထိုက်သင့်သည့် လေးစားမှုရှိရမည်။
Should respect the native culture and customs. The discrimination, sexual and human right abuses much be avoided and strongly prohibited.
ဒေသခံများ၏ ယဉ်ကျေးမှုဖြင့် ဓလေ့ထုံးစံများကိုလေးစားရမည်။ မတရားဖိနှိပ်မှုများ၊ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အမြတ်ထုတ်မှုများအား(လုံးဝ)ရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် ထိုအပြုအမူများ အားပြင်းထန်စွာ တားမြစ်ပါသည်။
Must avoid the following so as not to tarnish the CDA image.
4(a)–brawling in public under the influence of alcohol
CDA ၏ပုံရိပ်ကိုရုပ်ဆိုးစေသော ဖော်ပြပါအပြုအမူတို့ကိုရှောင်ရှားရမည်။
The under mentioned activities are not allowed in the working hour.
5(a)–Drinking alcohol and using narcotics
5(c)–Leaving from the duty without permission
၅(က)- အရက်သေစာသောက်စားခြင်းနှင့် မူးရစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုခြင်း
၅(ဂ)- ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လုပ်ငန်းခွင်မှထွက်ခွာခြင်း
Should not involve in any politics.
Mush not abuse project fund and assets, the conflict of interest and misuse of funds are strongly prohibited.
စီမံကိန်း၏ငွေကြေးနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းများအား မှားယွင်းစွာအသုံးပြုခြင်းကို(လုံးဝ)ရှောင်ကြဉ် ရန်နှင့် ထိုအပြုအမူများအား ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။
Should not accept anything like money, favour, presents etc…, for the service served.
လုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ရသော ဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် ငွေ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ဆောင်စ သည်များကို လက်ခံခြင်းမပြုရ။
Every performance must be transparent and accountable.
If want to quit the job must inform (30)days in advance.
If absent from the assigned post for (7)days without permission, should be taken action upon or expelled.
တာဝန်ကျရာအရပ်မှ ခွင့်ပြုချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ (၇)ရက်ဆက်တိုက်ပျက်ကွက်ပါက အရေးယူခြင်းခံရမည်(သို့မဟုတ်) ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရမည်။
Must not breach the confidentials.
Sexual exploitation or sexual abuse by humanitarian workers constitute acts of gross misconduct and are therefore grounds for termination of employment.
လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရင်းဝန်ထမ်းများမှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်အ မြတ်ထုတ်ခြင်း (သို့) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဖွယ်မရာပြုခြင်းတို့သည် လုံးဝလက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်မှုများဖြစ်ပြီး၊ အလုပ်တာဝန်မှရပ်စဲခြင်းခံရသည်အထိ အရေးယူခြင်းခံရ မည်။
လိင်ဆက်ဆံရန်အတွက် အခွင့်အရေးတောင်းခံခြင်း (သို့) နှိမ့်ချသော၊ သိမ်ငယ်စေသောအလွဲ သုံးစားပြုသော အမူအကျင့်များအပါအဝင် လိင်ဆက်ဆံရန်အတွက် ငွေကြေး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေးနှင့်ပစ္စည်း (သို့) ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် လဲလှယ်ခြင်းကိုတားမြစ်သည်။ ထိုအထဲတွင် အကျိူးခံစားခွင့်ရှိသူများအား ထောက်ပံ့ကူညီမှုများကိုအသုံးချ၍ လိင်မှုကိစ္စအလဲအလှယ်ပြု လုပ်ခြင်းလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။
လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရင်းဝန်ထမ်းတစ်ဉီးအနေဖြင့် မိမိ၏အဖွဲ့အစည်းမှ (သို့) အခြားအဖွဲ့အစည်းမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဉီးဉီးသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မဖွယ်မရာပြုခြင်း (သို့) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်ခြင်းကို ကျူးလွန်နေသည်ဟု စိုးရိမ်မှု (သို့) သံသရ ရှိလာပါက အဆိုပါဝန်ထမ်းသည် မိမိစိုးရိမ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အဖွဲ့အစည်းအတွင်း သတ်မှတ် ထားရှိပြီးဖြစ်သည့် သတင်းပို့တိုင်ကြားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းတိုင်ကြားရမည်။
Failure to abide by the code of conduct could be liable to be terminated from the program without warning.
ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက ကြိုတင်သတိပေးခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ငန်းမှရပ် စဲခံရမည်။